Home News Gudigga Difaaca oo u Yeeray Wasiirka Gaashaandhigga Iyo Taliyayaasha Ciidamada
Gudigga Difaaca oo u Yeeray Wasiirka Gaashaandhigga Iyo Taliyayaasha Ciidamada
Maanta ayaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan Magalada Muqdisho Guddiga difaaca Golaha Shacabka Soomaaliya iyaga oo ka hadli doona dhibaatoyinka ay Ciidamada dowladda u geystaan dadka rayidka ah.
Guddiga ayaa waxa ay u yeereen oo Maanta hortagaya Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga iyo dhammaan taliyeyaasha Ciidamada dowladda federaalka maadaama dilal farabadan ay todobaadkii la soo dhagay ay geysteen Ciidamada dowladda.
Xoghayaha Guddiga difaaca Golaha Shacabka Xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay inay Wasiirka iyo taliyeyaasha su’aalo dhowr ah ka weeydikn doonaan dhibaatoyinka soo laab laabtay oo ay geystaan ciidamada dowladda.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa ciidamada dowladda waxa ay Magalada Muqdisho ku deen Gabar 9 Sano jir aheyd kana mid aheyd Ardayda Iskuulka Hoyga Xamar iyo Dayax Iimaan oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir,waxaana sidoo kale ay horay u dileen dhalinyarada ku Shaqeysa Mooto Bajaajta.
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa dhowr mar go’aamiyey in Ciidamada hubka waaweyn ee faraha badan ku dhex wata Magalada Muqdisho balse taasi aysan dhaqan gelin.
Previous articleGudoomiye Axmed Shiidka loo Xil ka Qaadis Lagu sameeyay!!
Next articleMadaxweyne Cagjar’’Dhulalkii xooga lagu heeystay waan soo celinay,digniin ayaana dirayaa’’
Muqdisho Online - Xafiiska wararka ee Gobolka Banaadir. Waxaad nagala soo xiriir kartaa m[email protected] ama twitter @muqdisho_online
Gudigga Difaaca Baarlamaanka oo ka shiraya Dayacaada Amnigga Caasimada iyo Xildhibaanadda...